Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Flightgbọ elu si Nur-Sultan na Bishkek na Air Astana ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • Akụkọ Kyrgyzstan • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Flightgbọ elu si Nur-Sultan na Bishkek na Air Astana ugbu a.
Ndị njem niile na-aga Kyrgyzstan, gụnyere ụmụ amaala nke Republic of Kyrgyzstan, ụmụaka sitere na afọ isii na ndị njem njem, ga-eweta asambodo PCR nwere nsonaazụ na-adịghị mma, yana nnwale emere n'ime awa 72 tupu ọpụpụ. Ndị njem gbara ọgwụ mgbochi zuru oke na ihe a chọrọ.
Air Astana ga-amaliteghachi ụgbọ elu ozugbo na isi obodo Kyrgyzstan, Bishkek malite na Nọvemba 17, 2021.
Air Astana ga-eji ụgbọ elu Embraer E190-E2 na okporo ụzọ Nur-Sultan, Kazakhstan - Bishkek, Kyrgyzstan.
Nur-Sultan - ụgbọ elu Bishkek ga-amalite ọrụ ugboro abụọ n'izu na Wednesde na Sọnde.
Air Astana ga-amaliteghachi ụgbọ elu ozugbo site na Nur-Sultan gaa isi obodo Kyrgyzstan, Bishkek na 17th Nọvemba 2021.
A ga-eji ọrụ arụ ọrụ ndị a na mbụ Ikuku Astana Embraer Ụgbọ elu E190-E2 ugboro abụọ n'izu na Wednesde na Sọnde, yana ugboro abụọ ọzọ na Mọnde na Fraịde na-amalite na Disemba.
Ọrụ n'etiti Almaty ruo Bishkek na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Embraer Ụgbọ elu E190-E2 nwere nhazi ụlọ akụ na ụba na ọkwa akụ na ụba, na-enye ndị njem na-ahụ maka akụ na ụba ego mbụ nbanye na ịbanye, mmụba ibu, menu klaasị azụmahịa na ohere ezumike azụmahịa.
Ikuku Astana bụ ọkọlọtọ ụgbọelu nke Kazakhstan, nke dabeere na Almaty. Ọ na-arụ ọrụ ndokwa, ọrụ ụlọ na nke mba ụwa na ụzọ 64 si isi isi ya, Almaty International Airport, na site na isi ya, Nursultan Nazarbayev International Airport.